Izikimu Zombhede Wegumbi Lokulala - Yenza Ukulala Kwakho Kube Ngcono Ngokukhetha Umbala Ofanele Wopendi Ohlanganayo - Bedroom Colour Schemes
Izikimu Zombhede Wegumbi Lokulala – Yenza Ukulala Kwakho Kube Ngcono Ngokukhetha Umbala Ofanele Wopendi Ohlanganayo
Ubuwazi ukuthi umbala wependi lokulala udonga ulithinta kakhulu ikhwalithi yokuphumula? Ngaphandle kokukwazi ukuhlinzeka ngesimo sokunethezeka, ukukhetha umbala opende wokulala ofanele kungaba nomthelela omuhle empilweni yokomoya.
Igumbi lokulala elinomsebenzi walo ophambili njengendawo yokuphumula ngemuva kosuku oludinayo lwemisebenzi, ngaphandle kokuqaphela liphinde libe yindawo lapho sinciphisa khona ‘ukukhathala okungokomzwelo’, ubuvila, noma indawo yokufunda izincwadi noma ukubukela umabonakude ngenkathi silele ngaphandle kokuba kuphazanyiswa abanye.
Ngeshwa, abaningi abaqondi ukuthi bangayikhetha kanjani umbala opende odongeni ofanele ozosetshenziswa egumbini lakhe lokulala. Kakhulu, umbala okhethiwe umbala owuthandayo / owuthandayo noma omhlophe unesizathu esihlanzekile noma esikhanyayo. Eqinisweni, umbala ngamunye unombono ohlukile. Ukukhethwa kwemibala engalungile kungadala isizungu, kuthinte ukwehla kwemizwelo, futhi kukwenze ungakwazi nokuphumula ngoba imibala esetshenziswe ngokwengqondo ikhuthaza.
Izikimu Zombhede Onconyelwe Igumbi Lombhede Wokulala
Lokhu okulandelayo imibala yekamelo lokulala esikhethe ukukusiza uphumule kakhudlwana nangokuthula.
Izikimu Zombhede Wombhede # 1: Luhlaza
Umbala oluhlaza ukholelwa ukuthi unikeza umbono wekamelo lemvelo ngaphezulu ukuze linikeze isimo esivumayo egumbini. Umbala ohambisana nemibala yemvelo, njengamaqabunga, utshani, umkhathi wentaba wenza umoya wegumbi ube ngcono futhi uvuseleleke.
Khetha uhlaza lweqabunga, luhlaza okotshani noma oluhlaza okotshani. Imibala ezolile nengaphendukiyo yokupenda lolu donga ngaphandle kokubangela ukuzola ingasiza ukuvuselela ubuchopho bomuntu ukuba buqabuleke ngokushesha lapho ngivuka. Umphumela uba ukulala okuphumuzayo futhi kudambise ubuvila ngemuva kokuvuka futhi kukwenze uzizwe usuqedile futhi unamandla ngokwengeziwe.
Izikimu Zombhede Wombhede # 2: Oluhlaza okotshani
Ngaphandle kokuluhlaza, ungakhetha umbala oluhlaza okwesibhakabhaka njengombala omelela imvelo. Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka, o-grey ohlaza okwesibhakabhaka, noma oluluhlaza okwesibhakabhaka, uzokuthatha njengokungathi usemngceleni wolwandle. Umbono wemvelo, ohlanzekile, okhanyayo futhi opholile owenziwe ngumbala lo uzokwenza ukulala kwakho kuzizwe kuhle.
Njengokuhlaza nje kuphela, ukusetshenziswa kwemibala yopende odongeni ngokuluhlaza okwesibhakabhaka nakho kunganikeza umoya omuhle. Yize kufakwe imibala engakhuphula, i-bluu iletha umbono obandayo ukuze ukwazi ukulala kalula.
Izinhlelo Zombhede Wombhede # 3: Beige
I-Beige, okuyinhlanganisela ansundu nomhlophe, ifakiwe kumbala othobekile futhi ozolile. Lo mbala ungenza abantu okukuwo bazizwe bezolile futhi bekhululekile ukuze baphumule kahle. Shono lo mbala usetshenziswa kabanzi emahhotela ezinkanyezi ukwenza izivakashi zawo zizizwe zisekhaya.
Izinhlelo Zombhede Wombhede # 4: Grey
Hlanganisa umbala ophuzi odongeni ngezakhiwo zokhuni, lapho-ke ikamelo elizizwa lifudumele futhi likhululekile lizokwenza ikhwalithi yokuphumula kwakho ithuthuke. Yize ifakiwe imibala ashukumisayo neyanamuhla, ukukhetha lo mbala njengombala wepende lakho lokulala kunganikeza umbono wokuthi kukhona okuvulekile futhi okuhlanzekile. Ilungele amakamelo okulala amancane.
Manje, yimuphi ocabanga ukuthi umbala wepende odongeni ongawukhetha? Ah yebo, khumbula ukuthi ukuze uthole umoya ntofontofo egumbini lokulala, into yokuqala okufanele uyenze ukulungisa umbala odongeni lwendlu ngokukhethwa kombala ofanele. Gwema imibala egqamile noma imibala emnyama kakhulu ngoba izokwakha umbono ongemuhle.
Amathiphu Ama-Smart Wokwakha Igumbi Lokulala Elihle Ngezindawo Zokulala Umbhede
Ngaphambi kokuthi wazi Izikimu Zombhede Wegumbi lokulala ezilungele impilo, okokuqala, yazi amathiphu wokwenza ikamelo lokulala elinethezekile ngezansi. Igumbi elinethezekile ngokuqinisekile linengaphakathi elenzelwe ngokucophelela, kufaka phakathi ukukhetha imibala kapende nefenisha okufanele ivumelane. Nawa amanye amathiphu angasetshenziswa ukwakha igumbi elinethezekile.
Khetha imibala enomqondo wokuthoba ukuze ingakuhlali uphapheme futhi uhlangabezana nokuqwasha.
Nikeza umbono obanzi, noma empeleni igumbi linosayizi alilikhulu kakhulu.
Khetha umdlalo ofanele phakathi kombala wepende nefenisha egumbini. Imibala engathathi hlangothi ehambelana nayo yonke imibala ingcono.
Ungahlanganisi izinto eziningi egumbini. Khetha izinto ezisebenzayo futhi ezidingekayo egumbini.
Lapho uvuka ekuseni, umbala ophuzi ungakusiza ukuthi uqale usuku ngentshiseko ethe xaxa. Lo mbala uzophinda ugcinwe ekucindezelweni. Khetha umbala othambile ophuzi kakhulu ukuze ungakwenzi uthokoze kakhulu ebusuku.
Ngokuyisisekelo, azikho ezinye izifundo ezenziwa ngemibala yepeyinti lokulala elilungele impilo. Ngakho-ke umphumela wombala kumuntu ngamunye ungahluka. Noma kunjalo, khetha imibala ekwenza wehlise umoya futhi uthokomele ukuze ungabi nezinkinga zokulala futhi impilo yakho ingaphazanyiswa.
Umbala uhlobene kakhulu nokunambitha ukuze wonke umuntu abe nokukhetha okungafani. Uma umbala owuthandayo ungafakwanga ngombala ongadala uzizwe ukhululekile, hlela ekukhetheni kweminye imihlobiso yegumbi. Imibala ye-Calmer ingabusa, kepha lokho akusho ukuthi akufanele kube neminye imibala engavusa igumbi. Ngakho-ke, ukujabulele ukuhlola uhlobo olungcono kakhulu lwe-Bedroom Colour Schemes yakho!